eSancharpati | एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, होला त माधव नेपालसहित २२ जना सांसदलाई कारबाही ? - eSancharpati एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, होला त माधव नेपालसहित २२ जना सांसदलाई कारबाही ? - eSancharpati
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, होला त माधव नेपालसहित २२ जना सांसदलाई कारबाही ?
५ श्रावण २०७८, मंगलवार ०९:४२
आज पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेभएको छ ।
उक्त बैठक दिउँसो ३ बजेको लमगि तुल्सीलाल स्मृति भवन च्यासलमा बोलाइएको छ । उक्त बैठकले हिजो स्पष्टीकरण सोधेका पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित २२ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने एक स्रोतले जनाएको छ । सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले आज दिउँसो २ बजेसम्म समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको र जवाफ नआए ३ बजे बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले कारबाही गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
तर, अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले भन्नुभयो स्पष्टीकरण पत्र सबैलाई पुगिनसकेकाले आजको बैठकमा संगठन र विधान अधिवेशनका विषयमा छलफल केन्द्रीत हुनसक्छ । माधव नेपाल समूहले भने स्पष्टीकरण माग्नु सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित रहेको भन्दै जवाफ नदिने निश्कर्ष निकालेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई माधव नेपालसहित २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएपछि हिजो बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । ·
#आज पनि एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै #होला त माधव नेपालसहित २२ जना सांसदलाई कारबाही ?